ကုန်ကြမ်း Garcinia cambogia ထုတ်ယူမှုန့် (90045-23-1) hplc≥98% | AASraw
Garcinia cambogia ထုတ်ယူမှုန့်
/ ထုတ်ကုန်များ / အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့် / Garcinia cambogia ထုတ်ယူမှုန့်
SKU: 90045-23-1. အမျိုးအစား: အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Garcinia cambogia ထုတ်ယူမှုန့် (90045-23-1) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Garcinia cambogia ထုတ်ယူမှုန့် အဆိုပါမန်ကျည်းသီးသောအသီးကနေဖန်ဆင်းထားသည်နှင့်အလေးချိန်-အရှုံးကုန်ကြမ်းအမှုန့်အဖြစ်ရောင်းစားတော်တော်များများဖြည့်စွက်အတွက်အသုံးပြုသည်။ Garcinia Cambogia ရာစုနှစ်အိန္ဒိယနှင့်အာရှဒေသတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောစက်ရုံဖြစ်ပါသည်။ Garcinia Cambogia ရုံယခုအနောက်တိုင်းစာအာဟာရပညာရှင်တွေနှင့်သဘာအသုံးပြုမှုအတွက်အစားအသောက်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲရရှိမှုကြောင်းအသီးများကဲ့သို့သေးငယ်တဲ့ရွှေဖရုံသီးဖြစ်ပါတယ်။
Garcinia cambogia ထုတ်ယူမှုန့်ကိုဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Garcinia cambogia ထုတ်ယူမှုန့်အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Garcinia cambogia ထုတ်ယူမှုန့်
သိုလှောင်မှုကို Temp: ရေခဲသေတ္တာ
အရောင်: ရုက္ခဗေဒ, Powder နဲ့ Extraction, သဘာဝထုတ်ကုန်များ
ကိုယ်အလေးချိန်သံသရာအတွက်ကုန်ကြမ်း Garcinia cambogia ထုတ်ယူမှုန့်
Garcinia cambogia ထုတ်ယူမှုန့် (CAS 90045-23-1), HCA, Garcinia cambogia, Gambooge, Malabar မန်ကျည်း, Goraka, Brindle Berry ဟာ, Brindall Berry ဟာ
ကုန်ကြမ်း Garcinia cambogia ထုတ်ယူမှုန့်သုံးစွဲမှု
သင်နေတုန်းပဲအလေးချိန်အရှုံးသို့မဟုတ်ယင်း၏သည်အခြားအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက် GC တာကြိုးစားရန်လိုသောဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, ဒီမှာသင်သည် HCA ်ထုတ်ကုန်များအတွက်သောက်သုံးသောအကြံပြုချက်များအကြောင်းကိုသိထားဖို့လိုတယျ:
GC သုံးပြီး (1) လေ့လာရေးဘယ်နေရာမှာမဆိုတဦးတည်းဂရမ်ကနေ daily.Typical ဆေးများတစ်နေ့လျှင် 2.8-250milligrams အကြား ususally များမှာ 1000 ဂရမ်ရန်, အညွှန်းများကိုကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ကြပါပြီ။
(2) လေ့လာ Duration လည်းအချိန်ကနှစ်ခုအကြား GC အသုံးပြုခြင်းမှ 12 ရက်သတ္တပတ်အထိကျယ်ပြန့်ကွဲပြားကြသည်။
(3) HCA ၏အကောင်းဆုံးထိုးနေတုန်းပဲလက်ရှိမသိနိုင်ပါဘူး။ မြင့်မား HCA သောက်သုံးသောပင်တစ်ချိန်ကကိုလောင် HCA တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မား bioavailability ဆိုလိုတယ်လျှင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဟုတ်ဘူး။
(4) မြင့်မားတဲ့ပမာဏအနည်းငယ်ပိုပြီးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုလိုတာက HCA နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများသောက်သုံးသောအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်ဖြစ်ရှိပုံပေါ်ပေ။
(5) Garcinia cambogia သို့သော်ဘေးဖယ် GC ကနေ HCA ပေးဘို့လေ့လာမှုများအတွက်အများဆုံးအသုံးများဖြည့်စွက်ဖြစ်ဆက်လက် HCA ကိုလည်းစက်ရုံ hibiscus subdariffa ကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြည့်စွက်မှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
အများဆုံးလေ့လာမှုများနှင့် ပတ်သက်. ရှစ်ပတ်ခေါ်ဆောင်သွား GC ၏သက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသောကြောင့် (6), သုတေသီများဒီနောက်ဆုံးမှာယုံကြည် "ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အပေါ် HCA ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်အချိန်ဟာသိပ်တိုတောင်းပါတယ်။ "
လုံခြုံဘက်မှာမှားယွင်းစေရန်, garcinia cambogia "ဖော်မြူလာ" ဒါမှမဟုတ်ပါဝင်သောအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် HCA ၏တိကျမှုအဆင့်ဆင့်၌ရှိသမျှသောအစီရင်ခံရန်ပျက်ကွက်မယ်ရာ "ဖြည့်စွက် Blend" ဝယ်ယူရှောင်ကြဉ်ပါ။ အတော်များများကစီးပွားဖြစ်ဖော်မြူလာသာကုန်ကျစရိတ်ကိုဆင်းစောင့်ရှောက်ဖို့တက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် Standard ထိုးတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုအသုံးပြုထုတ်လုပ်သူများကလုပ်နေကြသည်။ အမြဲတမ်း (ဒီထုတ်ကုန်များ၏ရာခိုင်နှုန်းက 90045 မှ 23 ရာခိုင်နှုန်းကိုလှည့်ပတ်ဖြစ်သင့်) တံဆိပ်များကိုဖတ်နှင့်စကားများ "စင်ကြယ်သော garcinia cambogia (CAS 1-50-60)" နှင့်ရှာ "hydroxycitric အက်ဆစ် (သို့မဟုတ် HCA) extract" ။ သင်တစ်ဦးရောစပ်ဝယ်ယူရန်နှင့်တစ်ဦးငွေပမာဏမပါဘဲစာရင်းဝင်တစ်ဦးပစ္စည်းကိုမြင်ရပါလျှင်, ထိုသင်ရတဲ့နေအတိအကျအဘယ်အရာကိုမသိရပါဘူးတဲ့အနီရောင်အလံနိုင်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Garcinia cambogia ထုတ်ယူမှုန့်အပေါ်သတိပေး
တချို့လူတွေကသူတို့က GC သုံးပြီးထံမှမှာအားလုံးမည်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရပါဘူးတောင်းဆိုနေစဉ်, အခြားသူများအားအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံများရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒီနေရာတွင်အကြောင်းကိုကြားရကြပြီမဟုတ်အံ့သောငှါ Garcinia cambogia ထုတ်ယူမှုန့်များအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. တဦးတည်းနှောင့်ယှက်အကောင့်ဖွင့်: ဒါဟာကအနည်းဆုံးအများအပြားလူနာအသည်းပျက်ကွက်နှင့်အတူဆေးရုံများတွင်တက်အကွေ့အကောက်များသောနှင့်အရေးပေါ်အသည်းအစားထိုးလိုအပ်နေဖို့လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
Mayo Clinic ဆေးခန်းမှာအစားထိုးရေးစင်တာကထုတ်ဝေတဲ့တစ်ဦးက 2016 ဆောင်းပါးအမေရိကန်လူမျိုးသန်းပေါင်းများစွာကိုမှန်မှန်မကြာခဏဆေးလုံးပုံစံအတွက်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဖြည့်စွက်အသုံးပြုဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အပြည့်အဝသက်ရောက်မှုသတိထားမဟုတ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ အတော်များများကအလေးချိန်အရှုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများအလားအလာဝှက်ထားသောအန္တရာယ်များရှိုးနှင့် "hepatotoxicity နှင့်စူးရှအသည်းဒဏ်ရာနှင့်ဆက်နွယ်။ " နေကြတယ်
garcinia cambogia ၏ဖြစ်ရပ်မှာ, ကိုအလွယ်တကူ overused နှင့်အလွန်ကောင်းစွာ-စညျးမဉျြးစညျးကမျးမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ပါသည်။ တချို့ကထုတ်လုပ်သူတစ်နေ့လျှင်မြင့်မားသောဆေးများအကြိမ်ပေါင်းများစွာယူပြီးအကြံပြုပါသည်။ ဥပမာအား 30 ဖြောင့် 60 ရက်သတ္တပတ်ရှစ်သည်မုန့်ညက်မတိုင်မီမိနစ် 12 ရန်။ ဘေးဖယ်အသည်းပျက်စီးမှုကနေဖြစ်ပွားနိုင်သည်အခြား garcinia cambogia ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတို့ပါဝင်သည်:
• fuzzy သို့မဟုတ်အားနည်းဖြစ်လာ
အအေးမိ / နိမ့်ကိုယ်ခံစွမ်းအား function ကိုဖမ်းတစ်ခုတိုး•
GC အကြောင်းကိုစဉ်းစားရန်အခြားအရာတစ်ခုခုက၎င်း၏အလားအလာဆေးဘက် / မူးယစ်ဆေး interaction က၏ရှည်လျားသောစာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ လူအတော်များများကြောင့်အခြားဆေးဝါးများ, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း, အာဟာရအဆင့်ဆင့်, သွေးတွင်းသကြားဓာတ်နှင့်ပိုပြီးထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်မည်သို့ garcinia cambogia ကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ Garcinia cambogia အလားအလာနှင့်အတူဆိုးဆိုးရွားရွားဆက်ဆံနိုင်သည်
• (warfarin ကဲ့သို့) အသှေးကိုစဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ
Garcinia cambogia ထုတ်ယူမှုန့်ဟာမန်ကျည်းသီးသောအသီးကနေဖန်ဆင်းထားသည်နှင့်အလေးချိန်-အရှုံးကုန်ကြမ်းအမှုန့်အဖြစ်ရောင်းစားတော်တော်များများဖြည့်စွက်အတွက်အသုံးပြုသည်။
Garcinia cambogia (GC) အရှေ့တောင်အာရှနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံများတွင်ပေါက်သောသေးငယ်တဲ့, ရွှေဖရုံသီး-shaped အသီးဖြစ်ပါတယ်။ garcinia cambogia ၏အခွံမှာတွေ့ရှိသော့ချက်တက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်းအချို့သုတေသနအချို့လူတွေကကိုယ်အလေးချိန်ကိုကူညီနိုငျအကြံပြုထားတဲ့ hydroxycitric အက်ဆစ် (HCA) ဖြစ်ပါသည်။
Garcinia cambogia ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, သုတေသနရလဒ်များကိုနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ထောက်ခံစာအနည်းဆုံးပြောရောစပ်ပြီ။ ဝေးနေဖြင့် garcinia cambogia အသုံးပြုခြင်း၏အရှိဆုံးကောင်းစွာ-ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အကျိုးအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးမြှင့်ဖို့က၎င်း၏စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ garcinia cambogia ရဲ့ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုထားကြပါတယ်အခြားတောင်းဆိုချက်များပါဝင်သည်:
• (ပျြောရှငျပိုပြီးလုံ့လရှိသူများနှင့်လျော့နည်းပင်ပန်း feeling အပါအဝင်) တစ်ဦးထက်ပိုသောအပြုသဘောဆောင်သည့်စိတ်ဓါတ်များ
အထက်ပါတောင်းဆိုချက်များအများစုဟာသို့သော်အချို့ရှိသည်, သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများအားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုကြပြီမဟုတ်။ ရဲ့အမှန်တကယ်အချို့သောကုသိုလ်ရှိသည်နှင့်အခြို့သောထုံးစံ၌ထိရောက်သောဖြစ်ဟန်ကြောင်း garcinia cambogia ၏အကျိုးကျေးဇူးများပြန်လည်သုံးသပ်ကြပါစို့။
1) ။ အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု
ယင်း၏ထိရောက်မှုခဲခိုင်မာတဲ့သို့မဟုတ်တသမတ်တည်းဖြစ်တယ်ပေမယ့်တချို့ကလေ့လာမှုများ, garcinia cambogia, တကယ်တော့အဆီဆုံးရှုံးမှုအနိမ့်ပမာဏနှင့်အတူကူညီပေးနိုင်ဖြစ်အံ့သောငှါရှာတွေ့ပေါင်းအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအခြားကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအချို့ပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, သုတေသန HCA အဆီဆဲလ်များဖွဲ့စည်းခြင်းကိုအထောက်အကူပြုရန်ဖြစ်သော adenosine triphosphate-citrate-lyase လို့ခေါ်တဲ့အချို့သောအင်ဇိုင်း, ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်လုပ်တယ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒါပေမယ့်ထိန်းချုပ်မှုမှ GC ရဲ့သက်ရောက်မှုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများကသာပျမ်းမျှနှစ်ခုပေါင်တစ်ဦးမျှသာတဦးတည်းအားဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါတွေ့ပြီ။
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်သုတေသီများ 2011 အတွက်အဝလွန်ခြင်း၏ဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေအတိအကျဘာတွေလုပ်နေလဲ။ သူတို့မသောသူတို့အား Garcinia cambogia ထုတ်ယူမှုန့်ကိုယူသူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်သောအခါ, အလေးချိန်ခြားနားချက် (ပျှမ်းမျှရုံနှင့် ပတ်သက်. နှစ်ဦးကိုပေါင်တွင်) အလွန်သေးငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Plus အား, က GC ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အပိုဆောင်းပေါင်တိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိခဲ့ကြောင်းကောက်ချက်ချဖို့ပင်မဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Meta-analysis သည် GC ပါဝင်သော 12 ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းကနေရလဒ်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်အနည်းငယ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ၏အသုံးပြုမှုကိုကျော် HCA်garcinia cambogia ထုတ်ကုန်များ၏အသုံးပြုမှုကိုမျက်နှာသာကိုယ်အလေးချိန်အတွက်သေးငယ်တဲ့, ကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ သို့သော်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလည်းအချို့သောလေ့လာမှုတွေအစာခြေဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ( "အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များ") ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ HCA အုပ်စုများအတွက်နှစ်ကြိမ်အဖြစ်ဘုံခဲ့ကြသည်ပြတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
GC နှငျ့ပတျသကျသောအမျိုးမျိုးသောကိုယ်အလေးချိန်လေ့လာမှုတွေကနေရလဒ်များအလွန်ရောနှောခဲ့ကြပြီ။ အဆိုပါ Meta-analysis သည်တလေ့လာမှုရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပု HCA အုပ်စုတွင်အဆီ၏အလေးချိန်မှာသိသိသာသာကျဆင်းခြင်းအစီရင်ခံနှစ်ခုလေ့လာမှုများရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပု HCA အုပ်စု visceral အဆီ / အရေပြားအောက်ဆုံးအဆီ / စုစုပေါင်းအဆီဒေသများ, ဒါပေမယ့်နှစ်ခုကတခြားလေ့လာမှုတွေအတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် HCA နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအကြားမှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမသိသိသာသာခြားနားချက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်ကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခု GC 12 ရက်သတ္တပတ် (1,500 မီလီဂရမ်သောက်သုံးသော) အတွက်အသုံးပြုကြောင်းတွေ့ရှိရ "ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းကျော်လွန်သိသိသာသာကိုယ်အလေးချိန်နဲ့အဆီအစုလိုက်အပြုံလိုက်အရှုံးထုတ်လုပ်ရန်မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ "
garcinia cambogia ပတ်သက်. Meta-analysis သည်၏နိဂုံး? သုတေသီများသက်ရောက်မှု၏ပြင်းအားအသေးများမှာ "ဟုနေဖြင့်၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုတက်ချုပ်ဖော်ပြလျက်, လက်တွေ့ဆက်စပ်မှုမသေချာမရေရာဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်စမ်းသပ်မှုတွေကိုပိုမိုတိကျခိုင်မာစွာနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အစီရင်ခံတင်ပြရပါမည်။ "အဓိကအချက်သင်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ရုန်းကန်နေလျှင်, GC ဖွယ်ရှိရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်လေ့လာမှုများအရသိရသည်ဖြေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဖြစ်ပါတယ်။
2) ။ ခံတွင်းလျှော့ချ
လေ့လာရေးကိုလည်း garcinia cambogia တှငျတှေ့ HCA တည်ငြိမ်ပြီးပျော်ရွှင်ခံစားချက်တွေကိုနှင့်ဆက်နွယ်သော neurotransmitter serotonin, ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အနိမ့်သူတစ်ဦးဦးရဲ့အစာစားချင်စိတ်ကိုကူညီနိုင်မဖြစ်နိုင်သောင်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြ - ထို့ကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံအစာစားချင်စိတ်ဖိနှိပ်မှုနည်းမတရားသောနှင့်နှစ်သိမ့်သောအစားအစာများအဘို့အလျှော့အလိုဆန္ဒ ။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများကြောင့်လည်းစွမ်းအင်အသုံးစရိတ်တိုးမြှင့်ကူညီစေခြင်းငှါ, ပြသပါ။
ဒီလူအားလုံးနှင့်အတူအမှုမဟုတျကွောငျး, သို့သော်, စိတျထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သင့်ရဲ့အစာစားချင်စိတ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် (ထိုကဲ့သို့သောပုံမှန်အချိန်များတွင်ပရိုတိန်းအစားအစာများနှင့်ကျန်းမာ carbs နှင့်အတူဟန်ချက်ညီအစားအစာများစားသုံးခြင်းအဖြစ် serotonin ထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ရန်အခြားအလားအလာလျော့နည်းအန္တရာယ်များနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ် နေ့ကိုတစ်လျှောက်လုံး) ။
3) ။ အနိမ့်လက်စထရော
garcinia cambogia လက်စထရောအဆင့်ကိုတိုးတက်စေနှင့်မြင့်မားသော triglyceride ကိုလျှော့ချနိုင်ဖြစ်ခြင်းအချို့သောထောက်ခံမှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစ HDL "ကောင်းသော" လက်စထရောလ်မြှင့်ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသို့သော်မည်သူမဆိုပြီးသားလက်စထရောကိုထိခိုက်ကြောင်းဆေးတာဘေးကင်းလုံခြုံမယ့်, နှင့်၎င်း၏ဆိုးကျိုးများအလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသို့မဟုတ်ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်မထင်ကြဘူး။
လေ့လာရေး GC "anthropometric parameters တွေကို, REE, triglyceride သို့မဟုတ်ဂလူးကို့စအဆင့်ဆင့်ကိုမသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှု" ရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းအပါအဝင်လက်စထရောအဆင့်ကိုတိုးတက်စေရန်တခြားသဘာဝနည်းလမ်းတွေ, များများမှာလည်းရှိပါတယ်စိတျထဲတှငျ cholesterol.Keep လျှော့ချအပေါ်သေးငယ်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ, တွေ့ပြီ နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်, အခွံမာသီး, မျိုးစပါးနှင့်ပဲမျိုးစုံနဲ့တူက high-fiber ကိုအစားအစာကနေပိုပြီးဓါတ်အမျှင်အစာစားခြင်း။
4) ။ တည်ငြိမ်သွေးသကြား
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အဘယ်အရာကိုသွေးသကြားဓာတ်အဆင့်ဆင့်အပေါ် CG ရဲ့သက်ရောက်မှုကော? အချို့ကသက်သေအထောက်အထား garcinia cambogia ဆဲလ်စွမ်းအင်အတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ဂလူးကို့စ (သကြား) ကိုတက်ယူပုံကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်မှုသွေးသကြားဓာတ်ကိုကူညီနိုင်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းတည်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးတကျအောငျစခွေငျးငှါအရာအတွက်တလမ်းတည်းဖြင့်ပန်ကရိယ alpha amylase အင်ဇိုင်းတွေ၏တားစီး, ဖက်တီးအက်ဆစ်ပေါင်းစပ်အတွက်အူလမ်းကြောင်း alpha glucosidase နှင့်ပွောငျးလဲပြောင်းလဲမှုများအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါကဘိုဟိုက်ဒရိတ် metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်နေကြသည်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်လည်းတချို့လူတွေအတွက်အနိမ့်သွေးသကြားဓာတ်အဆင့်ဆင့်ရှိခြင်းများအတွက်အန္တရာယ်မြှင့်နိုင်ပါတယ်ပေမယ့်ဤသည်ဖြစ်နိုင်သည်, ပိုကောင်းတဲ့အင်ဆူလင်မှသင့်ခန္ဓာကိုယ်တုံ့ပြန်ကူညီပေလိမ့်မည်။ သငျသညျအသှေးကိုသကြားတျအပွောငျးအလဲတစ်သမိုင်းရှိပါက, သင်သည် prediabetic ဆီးချိုသို့မဟုတ်အင်ဆူလင်ရဲ့သက်ရောက်မှုပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းဆေးယူပြီးနေ GC သင့်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်စိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်နိမ့်ကျဆင်းစေပါလိမ့်မယ်။ ဒီ GC ယူသောသူလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာပါဘူးနေစဉ်, ကထည့်သွင်းစဉ်းစားနှင့်သင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူဆွေးနွေးရန်တစ်ခုခုမှအခြားအရာတစ်ခုခုပါပဲ။
Garcinia cambogia ထုတ်ယူမှုန့်ရော် Powder (CAS 90045-23-1)
ကုန်ကြမ်း Garcinia cambogia ထုတ်ယူမှုန့်စျေးကွက်
AASraw ထံမှ Garcinia cambogia ထုတ်ယူမှုန့် (CAS 90045-23-1) ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို
Garcinia cambogia ထုတ်ယူမှုန့် 90045-23-1 AASraw ။ HNMR
Garcinia cambogia ထုတ်ယူမှုန့်ရော် Powder ချက်ပြုတ်နည်း:
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Garcinia Cambogia Extract Powder
Flumethasone အက်စစ်အမှုန့် (28416-82-2)